Shotcrete, gunite okanye ikhonkrithi itshizwe nto eziphathekayo okanye nodaka ubhalwe umbhobho kunye pneumatically kulindeleke kwi Velocity eliphezulu phezu kumphezulu, njengobuchule yokwakha. It uqobo okugunyaziswe iintonga eqhelekileyo intsimbi, umnatha intsimbi, okanye imicu.
Shotcrete idla ixesha lonke-jikelele wokubandakanya zombini umanzi-umxube kunye owomileyo-umxube iinguqulelo. Xa ukwakhiwa pool, Noko ke, shotcrete libhekisela wazifefa umxube kunye gunite ukuba yome mxube. Kule meko, la magama interchangeable.
Shotcrete ibekwe kwaye ubunjwe ngaxeshanye, ngenxa force esatsiba. Kokuba kutshizwa kwi naluphi na uhlobo okanye imilo komhlaba, kuquka iindawo nkqo okanye phezulu.
vs. Dry mix emanzi
T indlela yena umxube owomileyo ibandakanya ubeka izithako eyomileyo ibe bese koko ekudluliseleni kubo pneumatically kusetyenziswa umbhobho ukuya umlomo. Le nozzleman elawula ukongeza lamanzi esatsiba. Amanzi kunye nomxube owomileyo singaxubeki ngokupheleleyo, kodwa njengoko mxube hits nokufunyanwa komhlaba. Oku kufuna nozzleman abanezakhono, ingakumbi kwimeko amacandelo ubukhulu okanye kakhulu lwesamente. Izinto eziluncedo yenkqubo umxube owomileyo ukuba umxholo amanzi anokuthi alungi-lungiswe kweso yi nozzleman, avumele ukufakwa ngempumelelo ngakumbi izicelo ezihamba kunye nkqo ngaphandle kokusebenzisa accelerators. Inkqubo mix owomileyo iluncedo kwizicelo ukulungiswa xa kuyimfuneko ukuyeka rhoqo, njengoko yimazi ngokulula alahlwa evela nethumbu.
Emanzi-umxube shotcrete ibandakanya zokumpompa ye lubuyisela elungiselelwe ngaphambili, ngokokuqhelekileyo ikhonkrithi lilungile-engumxube, ukuya umlomo. ngomoya yaziswa kwi esatsiba wamqhuba umxube kwi ukwamkelwa komhlaba. Le nkqubo-nkqubo emanzi jikelele uvelisa nkobe ngaphantsi, inkunkuma (xa izinto Uwa phantsi), nothuli xa kuthelekiswa inkqubo owomileyo-umxube. Esinokusibambisa senkqubo umanzi-ukuxubana zonke izithako zixubene kunye namanzi kunye nezongezelelo efunekayo, kunye nemiqulu ezinkulu zinokuthi zibekwe kwiindawo ngexesha ngaphantsi kwe inkqubo owomileyo.
S oomatshini hotcrete ziyafumaneka apho ukulawula inkqubo epheleleyo kwaye wenze fast kakhulu kwaye kulula. Iindlela Manual ukubakhulula asetyenziswa kwinkqubo ukutshiza umanzi kodwa eziphathekayo emanzi itshizwe ngokwemveli izicelo ngomatshini. Iziphumo zokutshiza eliphezulu elikhulu cross-amacandelo zifuna umsebenzi ukuba imishini. Iinkqubo ukutshiza eziphathekayo kunye iimpompo kabini zisetyenziswa ikakhulu yokusebenza ukuhlanganiswa ezimanzi. Ngokungafaniyo iimpompo eziphathekayo eqhelekileyo, le nkqubo kufuneka ukuba ukuhlangabezana nemfuno olongezelelweyo ekuthumeleni flow eziphathekayo oko kangangoko rhoqo kangangoko kunokwenzeka, yaye ngoko ke ngokuqhubekayo, ukuqinisekisa isicelo zokutshiza eyohlobo olulodwa '.